Waa maxay masiixi wanaagsan, oo ah Kaniisadda Adduunka oo dhan ee Switzerland (WKG)
Muddo sanado ah ayaan joojiyey cunista hilibka doofaarka. Waxaan ka iibsaday "suumanka suunka" suuq weyn. Qof baa igu yidhi: "Waxa jira hilib doofaar oo ku dhex jira bolseel-ga xawaaraha!" Waan adkayd inaan rumeysto. Daabacaadda yar, hase yeeshe, waxay ku caddaatay caddaan. "Shilka Sanduuqa Lacagta" . Laakiin bolse kasta oo u ekaa bolseal daboolka ah ma aha mid. Waxay badanaa kujirtaa hilibka doofaarka ka badan xarkaha. Waxaa sidoo kale jira kala duwanaansho dhadhanka. Xeerbeegti xeel-dheerayaal ah ayaa tijaabiyay sida ugu wanaagsan ee loo iibgeeyo gantaalka xamuulka ee 'Kassensturz'. Soodada ugu wanaagsan ee galgaleygu waxay ka koobneyd kaliya 57% maroodi waxaana loo qiimeeyay si gaar ah dhadhan fiican. Maanta waxaan si dhow u eegaynaa calaamadda "Masiixiyada" oo aan isweydiineynaa: "Masiixu miyuu Masiixu ku yaal?"
Ciise wuxuu ku yidhi jidka saxda ah ee idhihiisa idaha (Boqortooyadiisa) ku hoggaami albaabka. Ciise naftiisa ayaa yidhi, Anigu waxaan ahay albaabkan! Qaar ayaa raba inay ka dul fuulaan darbiga si ay u galaan boqortooyada Ilaah. Taasi ma yeeli doonto. Jidka badbaadada ee Ilaahay ina siiyay aadanaha wuxuu ka kooban yahay Toobad iyo Iimaan xagga Rabbi, Ciise Masiix. Taasi waa wadada kaliya. Ilaah ma aqbali karo qof isku daya inuu u fuulo boqortooyadiisa si kale. Yooxanaa Baabtiisaha ayaa wacdiyey basaska. Taasi waxay shardi u ahayd dadka reer binu Israa'iil inay aqbalaan Ciise inuu noqdo Bixiyahooda. Taasi waxay quseysaa adiga iyo aniga maanta!
"Laakiin markii Yooxanaa la xirey, Ciise wuxuu yimid Galili wuxuuna dadka ku wacdiyey injiilka Ilaah oo yidhi: Wakhtigii waa yimid, oo boqortooyadii Ilaah waa timid. Toobad keena oo Rumayso Injiilka (Calaamadee 1,14-15)!
Tan iyo wakhtigii dembigu dunidan yimid Aadan iyo Xaawo, dadku waxay ku hoos jireen harqoodka dembiga. Ciqaabta dembigu waa dhimashada weligeed ah! Qof kasta ayaa bixiya ciqaabkan noloshiisa markay tahay. "Toobad keena" macnaheedu waa in la sameeyo nolosha U--nolosha. Toobad keena noloshiisa laxiriirta oo Eebbe u noqo.
Sameynta Basaska micnaheedu waa: “Waxaan aqoonsanahay dembigeyga qaaliga ah waana qirayaa! “Anigu waxaan ahay dambiile ah oo mudan inaan dhinto weligiis! »Noloshayda nafteyda ah ee aniga nafteyda ah waxay i geyneysaa xaalada dhimashada
Idinkuna waad ku dhimateen xadgudubyadiinnii iyo dembiyadiinnii, kuwaas oo aad ugu noolaan jirteen sida nolosha adduunkan, waxaad ku hoos jirtaan xoogga weyn ee hawada ku dhex shaqeeya, kaas oo ah ruuxa ka dhex shaqeeya carruurta caasinimada. Iyaga dhexdooda markaan dhex joognay nolosheenna waxaan ku noolaynay damacyada jidhkeenna oo waxaan ku samayn jirnay doonistii jidhka iyo caqli ahaan, annaguna waxaan ahayn carruurta xanaaqa dabiicadda iyo kuwa kaleba. (Efesos 2,1: 3).
Ma taqaan sheekada soo socota? Ciise markuu maqlay inuu Laasaros buko, laba maalmood buu sugayay ka hor intuusan aadin Laasaros oo ku yaal Beytaniya. Muxuu Ciise sugayay? Waqtiga ilaa Laasaros uusan sii wadi karin wax uun kaligiis. Wuxuu sugayay xaqiijin dhimashadiisa. Waxaan qiyaasayay sida ay dareemayeen markii Ciise istaagay xabaashiisii. Ciise ayaa yidhi, Dhagaxa ka qaad. Marta, walaashii dhintay, waxay ku jawaabtay: "wuu quustay, wuxuu horay u dhintay 4 maalmood"!
Ma jiraan wax noloshaada ku qarsoon oo aadan dooneynin inuu Ciise muujiyo "adoo ku tuuraya dhagaxa?" Ku noqo taariikhda.
Markaasay dhagaxii ka tuureen oo Ciise waa tukaday, wuxuuna cod weyn ku qayliyey oo yidhi, Laasarosow, soo bax. Marxuumka ayaa soo baxay.
Waqtigii waa dhammaaday, codka Ciise isaguna wuu kuu yimaadaa. Boqortooyada Ilaah waa kuu soo dhowaatay. Ciise ayaa cod weyn ku dhawaaqay oo yidhi, soo bax! Su’aashu waxay tahay, sideed uga baxeysaa damiirkaaga, kalgacalka, hab-dhiska maskaxda ee fikirka iyo ficil ahaan? Maxaad u baahan tahay? Waxaad u baahan tahay qof kaa caawiya dhagxaanta oo aad tuujiso. Waxaad u baahan tahay qof kaa caawiya sidii aad uga saari lahayd nambarka. Waxaad u baahan tahay qof kaa caawiya sidii aad u aasin qaabab duug ah oo fikir iyo ficil leh.
Hadda waxaan u nimid qodobka xiga: «Odaygii hore»
Waxaan ognahay in odaygeennii hore iskutallaabta lagula qodbay isaga si jidhkii dembiga loo baabi'iyo si aynaan mar dambe dembiga ugu adeegin. Maxaa yeelay, ku alla kii dhinta waa la xoreeyay dembiga. (Rooma 6,6-7).
Aniga ahaan si aan ugu noolaado xiriir dhow oo lala yeesho Ciise, qofka da'da ah waa inuu dhintaa. Taasi waxay igu dhacday markaan baabtiisay. Ciise kaliya ma saarin dembiyadayda markii uu iskutallaabta ku dhintay. Wuxuu sidoo kale u daayay “odaygayga” iskutallaabta korkeeda.
Mise ma waydaan ogayn in kulli inteenna lagu baabtiisay Ciise Masiix lagu baabtiisay dhimashadiisa? Haddaba waxaynu isaga kula aasannay baabtiiska dhimashada dhexdeeda, in, sidii Masiixa kuwii dhintay loogaga sara kiciyey ammaanta Aabbihiis, innaguna aannu ku dhex socon karno nolol cusub » (Rooma 6,3-4).
Martin Luther wuxuu odaygan ugu yeedhay "oday Aadan". Wuxuu ogaa in qofkan odaygu "dabaalan karo". Had iyo jeer waxaan siinayaa «qofka da'da ah» xuquuqda inuu ku noolaado. Waxaan u isticmaalaa inay cagahayga wasakhdo. Laakiin Ciise wuxuu diyaar u yahay inuu maydho mar labaad iyo mar labaad! Muuqaalka Ilaah, waxaan ku nadiifiyey dhiiggii Ciise.
Bawlos wuxuu isbarbardhigayaa xiriirka sharciga iyo guurka. Markii ugu horreysay waxaan sameeyay qalad ah inaan guursado sharciga reer Laawi intii Ciise la odhan lahaa. Waxaan isku dayay inaan gaaritaan ku guuleysto dembigayga aniga oo ilaaliya sharcigaan. Sharcigu waa shuraako wanaagsan, anshax leh oo daacad ah. Taasi waa sababta aan sharciga ula wareeray ciise. Xaaskayga / seyga, sharciga ayaa ah, marna garaac ama waxyeelayn. Kumaan helin wax khalad ah dalabyadiisa midkood. Sharcigu waa xaq oo waa wanaagsan yahay! Si kastaba ha noqotee, sharcigu waa “nin” aad u adag. Wuxuu iga filanayaa kaamil ahaan dhinac kasta. Wuxuu iga codsanayaa inaan guriga nadiif ka dhigo. Buugaagta, dharka iyo kabaha waa inay joogaan meesha saxda ah. Cuntada waa in loo diyaariyaa waqti saxna ah. Isla mar ahaantaana, sharciga ma fidiyo farta si uu iga caawiyo shaqadayda. Isagu igama caawinayo jikada ama meel kale. Waxaan rabaa inaan soo afjaro xiriirkan sharciga maxaa yeelay ma ahan xiriir jaceyl. Laakiin taasi suurtagal maaha.
Naag waxay ninkeeda ku xidhan tahay ninkeeda sharciga, intuu ninku nool yahay, laakiinse ninku hadduu dhinto, iyadu xor bay u tahay sharciga ninkeeda. Hadday nin kale la joogto intuu ninkeedu nool yahay, waxaa loogu yeedhaa dhillo, laakiin haddii ninkeedu dhinto, sharciga way ka furan tahay, oo sidaas daraaddeed dhillo ma aha haddii nin kale guursado. Sidaas oo kale, walaalahaygiiyow, waxaa lagu laayay sharciga jidhka Masiix, in mid kale idin lahaado, oo ah kii kuwii dhintay laga sara kiciyey, inaynu Ilaah midho u soo bixinno. (Rooma 7,2-4).
Ciise wuxuu yidhi: «Ma jiro qof jacaylka ka weyn kan naftiisa u bixiya saaxiibbadiis (Yooxanaa 15,13) ». Waan ogahay in ereyadan ay khuseeyaan Ciise Masiix. Wuxuu naftiisa u huray adiga iyo adiga! Markaan naftayda u bixiyo Ciise, waa jacaylka ugu weyn ee aan ku sheegi karo isaga. Iyada oo aan shuruud ku shubtay noloshayda Ciise, waxaan kaqeybqaadanayaa allabarigii Masiix.
Haddaba, walaalayaalow, waxaan idinku baryayaa Ilaah naxariistiisa inaad jidhkiinna u bixisaan sida allabari nool, oo qoduus ah, oo Ilaah ka farxiya. Taasi waa adeegaaga cibaadada caqliga leh » (Rooma 12,1).
«Sidaa darteed: haddii qof Masiixa ku jiro, waa abuur cusub; midki hore ayaa dhaafay, oo bal eeg, kan cusub ayaa noqday, (2 Korintos 5,17).
Muhiimadda muhiimka ah: “Noloshu cusub ee Ciise Masiix”
Waxaan ka aqrinaa Warqadda in Galatiya: «Waan noolahay, laakiin imika aniga ma ihi, laakiin Masiix ayaa igu dhex jira» . Siduu noloshaada cusub ee Masiixu ku yahay? Heerkee ayuu Ciise u adeegsaday aragtida? Wuxuu kuu oggolaanayaa gurigaaga Si loo dhawro (qalbigaaga) wasakh iyo wasakh? Maya! Ciise wuxuu ubaahanyahay waxbadan oo sharcigu farayo! Ciise wuxuu yidhi:
Waad maqashay in la yidhi: Waa inaanad sinaysan. Laakiin waxaan idinku leeyahay, Nin kasta oo qof dumar ah damac u eegaa, durba qalbigiisuu kaga sinaystay. (Matayos 5,27: 28).
Waa maxay farqiga u dhexeeya Ciise iyo sharciga. Sharcigu wax badan ayuu u baahnaa, laakiin kuuma siin wax caawimaad ah iyo jacayl midna. Baahida Ciise waa mid aad uga badan sharciga uu dalbado. Laakiin wuxuu kugu caawin doonaa amarkaaga. Wuxuu dhahay: Aynu wax walba wada qabanno. Nadiifi guriga si wada jir ah, dharka iyo kabaha meel isla dhig meel ku habboon ». Ciise kuma noolaado naftiisa, laakiin wuxuu kaqeyb qaataa noloshaada. Taas macnaheedu waa inaadan sii noolaan doonin naftaada, laakiin ka qaybqaado noloshiisa. Waxaad ka qaybqaadanaysaa shaqada Ciise.
Taasina waa sababta uu ugu dhintay qof kasta oo halkaas ku nool hadda ka dib naftaada ha noolaan laakiin kii dhintay oo u kacay iyaga aawadood » (2 Korintos 5,15).
"Laakiin ku kora nimcada iyo aqoonta Rabbigeenna ah Badbaadiyeheenna Ciise Masiix" (2 Butros 3,18).
Waxaan ku koray nimco iyo aqoon xagga fahamka ah "Yaan ahay Ciise Masiix"! Tani waxay bedeshaa dhaqankeyga, dabeecaddayda iyo wax walba oo aan sameeyo. Taasi waa xigmad iyo aqoon run ah. DHAMMAAN WAA KHALIIF, waa hadiyad aan mudnayn! Waxay ku saabsantahay sii kordheynta wacyigelintaan xagga 'CHRIST IN US'. Balanqaadku waa inuu ku noolaado wada noolaansho kaamil ah "AADAN IN KRISKA".
Waxaan soo gaarnay gabagabada «Toobad keena oo laxiriira iimaanka»
Waxaan akhrinaa «Qeex oo rumee injiilka. Taasi waa bilowga nolosheena cusub ee Masiixa iyo Boqortooyada Ilaah. Aniga iyo aniga waxaan ku nool nahay Masiixa. Taasi waa war wanaagsan. Aammintani waa dhiirrigelin iyo loolan labadaba. Isagu waa farxad dhab ah! Aaminkan ayaa nool.
Oo maalin walbana gacanta Ilaah bay geliyeen. Wax kasta oo dhaca, waad ku nabad galeysaa gacmihiisa. Xaalad kasta ayuu gacanta ku hayaa wuxuuna ku siinayaa xigmad loogu talagalay go'aannada saxda ah ».
"Iimaanku waa kalsooni adag waxa aad rajaynayso iyo shaki la'aan wixii aydaan arkin" (Cibraaniyada 11,1)!